Archive du 20190411
Fitondram-panjakana Hikorontana ambony ambany atsy ho atsy
Milaza fa miasa ny fanjakana, fihetsiketsehana etsy sy eroa. Efa mazava anefa fa tsy misy ny vola.
Famadihana ny hetahetam-bahoaka ho lalàna Asa sarotra ho an’ireo te ho solombavambahoaka
Fanararaotan’ireo kandida ho depiote rehefa akaiky fifidianana toy izao ny mampanantena fanamboarana na fanatsarana fotodrafitrasa ao amin’ny distrika ilatsahany.
Emilien Ramboasalamana Nijery ifotony ny olan’Anosipatrana Atsinanana
Nidina ifotony nijery sy namaha ny olan’ny mponina ao amin’ny fokontany Anosipatrana Atsinanana, ny kandida laharana faha-4 ao amin’ny boriborintany faha-4, Emilien Ramboasalama.
Randrianasolo Jean Nicolas - Betroka Tsy matahotra fandrahonana ary vonona hifanehatra amin’ny rehetra
Efa nambaran’ny Cenit foibe fa tsy misy kandidam-panjakana amin’ity fifidianana solombavambahoaka 2019 ity fa mitovy avokoa rehefa nirotsaka hofidiana.
Lalaon’ny Nosy 2019 Taranja Malagasy 6 hiofana any Sina
Atleta Malagasy avy amin’ny taranja 6 hiatrika ny lalaon’ny Nosy 2019 no hiofana any Sina hanohy ny fampivondronana azy ireo,
Edito Miha ratsy izao fiainana izao
Ekena fa firenena Kristianina isika ary tsy lavina fa teny ao amin’ny baiboly ny hoe miha ratsy izao fiainana izao.
Niaiky ny Foibe fitsarana fiarakodia “Betsaka ny fiara ratsy mbola miasa”
Nanambara ny teo anivon’ny foibe fitsarana fiarakodia (DGSR) omaly alarobia 10 aprily fa hanatanteraka hetsika fandraisana anjara mba hieren-doza ny Paska amin’ity taona 2019 ity.
Fanamboarana ny RN5A Ezahin-dRajoelina fafana ny dian-tanan-dRajao
Nifanao sonia tamin’ny sinoa amin’ny hanamboarana ny lalam-pirenena RN5A (Ambilobe-Vohémar : 150,710 km) ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina.
Tarazon’ny fampiatoana ny «PR»
Manevateva mpitandro filaminana ny mpamilin’ny lalam-pirenena
Mpivarokena eto Antananarivo Tsy manana fahazoan-dalana ny ankamaroany
Raha eo amin’ny firaisana voalohany fotsiny dia ny 90%-n’ny mpivarokena no tsy manana fahazoan-dalana mivarotra avy amin’ireo dokotera mpitsabo biby.
Lalana eto Madagasikara Simban`ny kolikoly sy ny politika
Ratsy na tsy ampy fikarakarana ny ankamaroan’ny lalana na eto an-drenivohitra na any ambanivohitra amin’ireny lalam-pirenena maro samihafa ireny ankehitriny.